Mkpado: igbe ntinye aka | Martech Zone
Tag: ndenye aha igbe n'elu ikpo okwu
N'ebe: Buru Ọrụ Igbe Ndenye Aka Gị na Platform Ecommerce a
Otu oke iwe anyị na-ahụ na ecommerce bụ onyinye igbe. Igbe ndị debanyere aha bụ onyinye na-akpali akpali… site na ngwa nri, ngwaahịa agụmakwụkwọ ụmụaka, na nkịta na-emeso… iri nde ndị na-azụ ahịa debanye aha maka igbe ndenye aha. Oge, nnabata, ihe ọhụụ, ihe ijuanya, iche, na ọnụahịa bụcha njirimara nke na-ebugharị igbe ndenye aha. Maka azụmaahịa ecommerce okike, igbe ndenye aha nwere ike ịba uru n'ihi na ị gbanwere ndị na-azụ ahịa otu oge ka ha bụrụ ndị ahịa ugboro ugboro. Ndenye aha eCommerce bara uru